१६ बर्षे यूवती गोठालो जाँदा वाँसघारीमा भर्जिन तोडेको सत्य यौन कथा - Kathmandu Online
Admin — October 27, 2017 in Uncategorized • 1 comment
म भर्खर १६ बर्षको थिए , कक्षा ९ मा पढ्दै थिए । शनिवारको दिन म सँधै गोठालो जान्थे , किन भने शनिवार सबैजना घरमा ब्यस्त हुन्थे । एक दिनको कुरा हो , म गोठाला जाँदा खेरि एक जना मगरनी केटी पनि गएकी थिई । पहिला देखिनै देखेको तर त्यति धेरै बोलेको थिईन । हामी गोठालो जाँदा उसको भैसीले राँगा खोजेको रहेछ । मेरो राँगाले उसको भैसीलाई हाम्रै अगाडी लामो लिङ्ग निकालेर याैन सम्पर्क थाल्यो । उसलाई लाज लागेछ र मुण्टो निहुराएर बसी रहि । अनि मैले सोधे “के भयो रु लाज लाग्यो होरु” उसले लजाउँदै “होईन” भनी ।
फेरि २/३ पटक जति याैन सम्पर्क हेर्दा उसको याेनि त पानी पो बग्न थाली सकेको रहेछ । मैले त्यती वास्ता गर्दिन थिए , किन भने म कहिले काँही ब्लु फिल्म हेर्थे । त्यही भएर मलाई चाँहि सामान्य जस्तो लाग्थ्यो । त्यस पछि म चाँहि यसो मास्तिर गुलेली हान्न गाको त उसले त आफ्नो फ्रक खोली ओरी आफ्नो औला आफ्नै याेनिमा छिराउँदै रहिछ । मैले हेरि राखे , शायद उसले मैले हेरी रहेको देखेकी थिईन होला ।
एक छिन पछि म उसको छेउमा गए र “के गरेकोरु” भनेको त उ डराएर हतार हतार आफ्नो कपडा लगाउन थाली । अनि मैले भने “त्यो राँगा र भैसीले जस्तै गर्ने हो र? ” उसले त सजिलै “हुन्छ” भनि । त्यस पछि मैले उसलाई याैन सम्पर्क खोजेको त उसले मलाई “खै भैसी र राँगाले जस्तो गरेकोरु” अनि मैले भने “त्यही त गर्न लागेको नि ।” उसले भनि “राँगाले त पहिला भैसीको याेनी चाटेको थियो ।“ मैले उसको कुरा बुझे र यसो याेनी चाट्नलाई हेरेको त उसको याेनीत बर्खाको हिलो बाटो जस्तो भएको रहेछ , पानी पानी । केही बेर उसको याेनी चाटे र मेरो लिङ्ग चुस्न लगाए ।
मेरो लिङ्ग चुसाउँदा मैले अलि बल गरेर ठेली दिएको त उ खोक्न थाली । “ल , अब चिकौ है त” भनेर उसलाई याेन सम्पर्क । पानी धेरै आयो भने त याैन सम्पर्क पनि मजा हुने रहेछ । उसलाई मजाले याैन सम्पर्क गरें र याैन सम्पर्क गर्दा मेरो फुँसी चाहि उसको मुखमा झारिदिए । मजाले “कति मिठो” भन्दै उसले फुँसी खान थाली । केहि बेर पछि “अब जाउँ” भन्दै भैसी र राँगा खोज्न थाल्यौ । हाम्रो राँगा र भैसीले छिमेकीको सबै धान खाईदेएर खत्तम पारेछ । मगरनीको याेनि भएर फोकटमा १५,००० र जरि माना तिर्न पर्यो ।
With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website hasalot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it appearsalot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any techniques to help protect against content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.